Sawiro,Waxgaradka gobolka Nugaal oo soo saaray baaq ay uga soo horjeedaan Al shabaab – Radio Daljir
Febraayo 27, 2013 7:48 b 0
Garoowe,Feb,27?Shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen Cuqaasha culimaa’udiinka iyo waxgaraka gobolka Nugaal ayaa maanta lagu qabtay ?xarunta baarlamaanka ee magaalada Garoowe ?waxayna laga soo saaray ?baaq looga soo horjeedo ururka Al shabaab,qoraalkii ka soo baxay shirkaan ayaa wuxuu u qornaa sidaan.
Annagoo ah Isimada,cuqaasha,culimada,Aqoonyahanka,siyaasiyiinta ganacsatada,haweenka iyo dhalinyarada gobolka Nugaal ee ka soo qaybgalay shirwaynaha lagaga arinsanayo ka hortaga iyo la dagaalanka kooxda habowsan ee Al shabaab waxaan cadaynanaa in aan saxiixnay kuna heshiiney arimaha soo socda.
1-Annagoo mataleyna ?qaybaha kala ?duwan ee bulshada gobolka Nugaal waxaan meel uga soo wada jeednaa ka hortagga iyo la dagaalanka kooxda? Khawaariijta ah ee Al shabaab
2-Daggaalka lagula jiro kooxda AL shabaab waa qadiyad umadeed iyo waajib diini ah oo ay tahay in qof walbaa kaalintiisa ka qaato,sidaas darteed lama siyaasadayn karo lamana qab-yaaladayn karo loomana adeegsan karo nin iska dhicin iyo nin ku xumayn.
3-In loo hawlgalo sidii soomaali loo heshiisiin lahaa haday tahay qabiilooyin iyo haday tahay maamulo si aan kooxaha jaah wareersan uga dhex faa?iidaysan khilaafkooda.
4-Si kooxdaas cadowga ah looga sifeeyo gobolka Nugaal,Puntland iyo dhammaan dalka Soomaaliya waxaan diyaar la nahay naf,maal iyo maskaxba waxaana ugu baaqaynaa dadka yaga miyi iyo magaalo guda iyo dibadba inay dagaalkaas si buuxda ugu diyaar garoobaan uga qaybqaataan maskax maal iyo muruq intaba.
5-Waa in Dawladda Puntland iyo shacabku si buuxda uga wada shaqeeyaan la daggaalanka kooxdaan isla markaana ay Puntland iskaashi buuxa arimahaan kala yeelataa maamulada dalka oo dhan.
6-Daggaalka lagula jiro kooxda habowsan waa mid loogu danaynayo diinta iyo umada sidaas darteed cidna uma adeegsan karto la dagaalanka diinta ?dhibaataynta umada.
7-Cidii ku lug yeelata falalka iyo danbiyada kooxda habowsan ee Al shabaab fuliso waxaa lagu qaadayaa xukunka shareecada islaamka oo aan cidana ka Eexanayn cidna u Eexanayn raali ayaana ka wada nahay xataa haday yihiin kuwa dad noogu dhow.
9-Qofkasta oo kooxdaas ah waa in xabsi lagu hubsado si isaga loo badbaadiyo umada sharkiisa looga badbaadiyo, ayna helaan cadaalad iyo maxkamad ku aadan fal danbiyeedka ay galeen.
10-Waxaan ku baaqaynaa in la qabto shir wayne heer Puntland ah si go?aamadaani u noqdaan xeer ay dhigteen dhammaan bulshada reer Puntland shacab iyo dawlad.
11-Waxaan ugu baaqaynaa maamulada Soomaaliyeed in la da dajiyo shir waynihii Soomaali uga arinsan lahayd xal u helista mushkilada kooxda Al shabaab ee ay horay u soo jeediyeen culimadu ayna aqbaleen Puntland iyo dawaladda dhexe ee Soomaaliya.